Compare Zimbabwe To Cuba
Show the size of Cuba compared to Zimbabwe Hide the map
If Cuba were your home instead of Zimbabwe you would...
The life expectancy at birth in Cuba is 78.22 while in Zimbabwe it is 55.68.
The GDP per capita in Cuba is $10,200 while in Zimbabwe it is $600
be 97.16% less likely to be unemployed
Cuba has an unemployment rate of 2.70% while Zimbabwe has 95.00%
Zimbabwe consumes 0.0588 gallons of oil per day per capita while Cuba consumes 0.5712
The percentage of adults living with HIV/AIDS in Cuba is 0.10% while in Zimbabwe it is 14.70%. 100 people in Cuba and 39,500 people in Zimbabwe die from AIDS each year.
510 in every 100,000 people are currently imprisoned in Cuba compared to 145 in Zimbabwe
The number of deaths of infants under one year old in a given year per 1,000 live births in Cuba is 4.70 while in Zimbabwe it is 26.55.
use 35.31% more electricity
The per capita consumption of electricity in Zimbabwe is 912kWh while in Cuba it is 1,234kWh
4.70 in every 100,000 people are murdered annually in Cuba compared to 7.50 in Zimbabwe
The annual number of births per 1,000 people in Cuba is 9.90 while in Zimbabwe it is 32.47.